Kuunza mota kubva kuSingapore kuenda kuUK | Yangu Mota Kunze
Uri kupinza mota kubva kuSingapore kuenda kuUnited Kingdom?
Isu tiri nyanzvi mukupinza mota kubva kuSingapore, kusanganisira kutumira kunze, kutumira, kubvumidzwa kwetsika, UK inland marori, kuteedzera kuteedzera uye kunyoresa kweDVLA. Isu tinobata maitiro ese, tichikuchengetera iwe nguva, kunetsekana uye mari isingafanoonekwi
Yedu makotesheni ekupinza mota kubva kuSingapore akazara zvizere uye anosanganisira zvese zvinhu zvinodiwa kuti mota iwane pano uye yakanyoreswa muUK yakagadzirira mugwagwa. Ndokumbirawo uzadze ruzivo rwako kuti ugamuchire chako chakatemerwa chitauro nhasi.
Isu takanyatso sarudza nyanzvi dzekutakura mota dzinoshanda kunze kweSingapore kubata mota dzevatengi vedu. Isu tinopa complimentary muunganidzwa mukati meguta miganho. LTA kunyoreswa kwemotokari iko iko iko kuita kwepamhepo uye isu tinokwanisa kupa magwara ekuti ungaite sei izvi kuti uve nechokwadi chekuti unogashira akakodzera marejisiti eSingapore kudzoserwa sekudzoserwa. Isu tinotakura mota kubva kuSingpore tichishandisa midziyo yakagovaniswa, zvichireva kuti iwe unobatsirwa nemitengo yakachipa yekufambisa mota yako kuenda kuUK nekuda kwekugovana nzvimbo yemidziyo nedzimwe mota dzatiri kuendesa panzvimbo yevatengi vedu.
Pakununura mota kubva kuSingapore, pane nzira ina dzakasiyana dzekubvisa tsika muUK, zvinoenderana nekwakatangira mota, zera uye mamiriro ako:
Uri kudzokera kumashure semunhu anotamisa achienda kuUnited Kingdom? Kana iwe uine mota kwemwedzi inopfuura mitanhatu uye uine humbowo hwekugara muSingapore uchitambanudza kumashure mwedzi gumi nemaviri - saka kupinza kwako muzviitiko zvakawanda hakuzovi pasi pekupinza mutero nemitero.
Kune mota dziri pasi pemakore gumi, kubva kuSingapore, mota yako inofanirwa kutevedzera zviyero zveUK. Izvi zvinoitwa neIVA kuyedza mota yako uchishandisa yedu yega IVA yekuyedza nzira. Iyi ndiyo yega nzira yekuvhiya yeIVA yakavanda munyika uye inoderedza zvakanyanya nguva dzekumirira kuti mota yako inyoreswe zvichienzaniswa nekushandisa anokwikwidza mota kupinza masevhisi.
Mota yega yega yakasiyana saka ndokumbirawo utoreko mutengo kuti tikurukure yakanakisa kukurumidza uye mutengo sarudzo yemamiriro ako ega.
Mota dzinounzwa kubva kuSingapore kuenda kuUK dzinogona kuda kumwe kugadziridzwa, kusanganisira iyo inomhanyisa kuratidza MPH kuverenga uye yekumashure mhute mwenje kumira kana isiri munzvimbo chaiyo yemarambi.
Isu takavaka ruzivo rwakazara rwezvose zvinogadzira uye mamodheru kuburikidza neruzivo, saka zvinogona kunyatsokutaurira iwe pane izvo zvinodiwa kuti zviitwe kumota yako.
Vanopfuura gumi-makore-makore mota vane mhando mvumo isingabhadharwe, asi zvichiri kuda MOT bvunzo uye kumwe kugadziridzwa kwakafanana neiyo yeiyo IVA bvunzo isati yanyoreswa.
Iko kunatsurudzwa kunoenderana nezera asi kazhinji kune iwo marambi epamberi uye kumashure kwechiedza mhute. Kana mota yako yapfuura makore makumi mana ekuberekwa haidi MOT bvunzo uye inogona kuunzwa yakananga kuUK kero yako isati yanyoreswa.
Zvinodhura zvakadii kupinza mota kubva kuSingapore?
PaMotokari Yangu Inotakura tinopa sevhisi yekunze yakakwana, zvisinei, zvirevo zvese zvinofungidzirwa kune yako chaiyo mota nezvinodiwa. Usazeze kupinda mukutaurirana kweasina kusungirwa quote yekuunza mota yako kubva kuSingapore kuenda kuUnited Kingdom.
Ruzivo rwakawanda rwatinoziva nezve mota zvinozove nyore kukupa iwo chaiwo mutengo wekupinza mota yako.